त्यो रात – जसले मेरो कोख भरिदियो र उसलाई मैले भगवान माने… सबैले एकपटक पढ्नै पर्ने – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २५, २०७८ समय: १९:४७:२९
कथा/इन्दिरा प्रसाईं – बिहे गरेको दस वर्ष नाघिसक्ता पनि उत्तराको कोख भरिएको थिएन । अब त घरपरिवार सबैले उत्तरालाई बाँझी भनेर उनकै मुखेञ्जी भन्न मात्र बाँकी थियो । तर शिक्षित र अर्थउपार्जनमा संलग्न अनि सम्पन्न माइतीका कारण उत्तराले धैर्य त्यागेकी थिइनन् । दुई वर्षअघि दिल्ली पुगेर पतिपत्नी दुबैको सम्पूर्ण मेडिकल जाँच पनि उत्तराकै पहलमा भइसकेको थियो । उक्त जाँचमा उमङ्गको विर्यमा फर्टिलिटिको अङ्श पर्याप्त नभएको नतिजा निस्केको थियो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,
के रै छ यस्को नयाँ नौलो हेरौं न त । उत्तरालाई लाग्यो र उनले त्यसमा क्लिक गरिन् । यो साइट पाँच मिनेट अघिमात्र परीक्षणका लागि राखिएको हो । जसकसैले यो साइट भिजिट नगर्नु होला । प्रयोगका क्रममा कुनै ग्राहकलाई कुनै समस्या पर्न गएमा गुगलले जिम्मेवारी लिने छैन। सावधानीका वाक्य लेखिएका राता अक्षरहरुलाई आवश्यकता भन्दा बढी प्रकाशित गरिएको थियो । सावधानीका कुरा पढेपछि उत्तराले रोमाञ्चको अनुभूति गरिन् । डराएर गुगलबाट फर्किनुको साटो उनलाई उक्त साइट एकपटक खोलेर हेर्ने उत्कट इच्छा भयो । त्यसैले उनले त्यहाँ पनि क्लिक गरिन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,
१। के तपाईं सन्तानहिन हुनुहुन्छ रु उत्तरको ठाँउमा हो होइन लेखिएको थियो । उनले हो मा चिनो लगाइन् ।२। के तपाईं पैंतिस वर्ष नाघ्नु भएको छैन र उत्तरको ठाँउमा छ छैन लेखिएको थियो । उनले छैन मा चिनो लगाइन् ।३।के तपाई विज्ञानसम्मत रुपले आमा बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ ? अर्थात् तपाईंको मेडिकल जाँच भइसकेको छ ? उत्तरका ठाँउमा छ छैन लेखिएको थियो । उनले छ मा चिनो लगाइन् । कृपया अर्को पानामा जानुहोस् लेखिएको ठाँउमा उत्तराले क्लिक गरिन् । तपाईं नछुने भएको कति दिन भयो र त्यहाँ कर्शरले तानेर अंक राख्नु पर्ने थियो । उत्तराले सातको अंक राखी दिइन् । त्यसपानामा त्यही एउटामात्र प्रश्न लेखिएको थियो र अर्को पानामा जाने चिन्ह थियो।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,